Hidhattoota WBO Godinoota Gujii Fi Gujii Lixaa: "Uummati adamoo godhee bakka dhokatanii guuraa jira" - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Daniel Areri
Hidhattoonni maqaa Waraana Bilisummaa Oromoon godinaalee Gujii fi Gujii Lixaa keessa socho'aa jiran uummata dararaa jiru jechuun jiraattonni ni komatu.
Guyyaa kaleessaa jiraattonni Godina Gujii magaalaa Nageellee fi naannawaa ishii lakkoofsaan 3000 ta'an rakkoo hidhattoonni kunneen hawaasa irraan gahaa jiran balaaleffachuun hiriira bahaniiru.
"Ollaa keenya keessa iddoo iddootti namni ni du'a, iddoo iddootti nama fuudhanii deemani, iddoo kaanitti dubartii gudeeduunillee in jira" jedhu jiraataan godinichaa BBC'n dubbise sababa hiriira bahaniif yoo himan.
Godina Gujii Lixaa keessatti ammoo sochii hawaasni godinichaa taasiseen hidhattoonni 70 ol hidhannoo hiikkatanii hawaasatti makamuu aanga'oonni godinichaa ni dubbatu.
Hidhattoota kana bakka bu'uun komii irratti dhiyaatu kana irratti qaama deebii kennu argachuu hin dandeenye.
Yeroo adda addaa nama karaa irraa butanii guyyoota muraasa booda gadi dhiisan, kan achumaan hafanillee hedduudha jedhu jiraataan kun.
Namoonni butaman namoota waltajjii adda addaa irratti waa'ee nagaa dubbataniifi, kanneen caasaa mootummaa gandaa kaasee hanga godina jiran ta'uus ni himu.
Jiraattonni hidhattoota kanaan butamanii gadi dhiifaman "maal akka ta'e hin beeknu, waa tokkollee hin dubbatani" jedhu.
Manguddoo ganna 80
Godina Gujii aanaalee akka Gumii Erdalloo, Liibaniifi Gooroo Doolaa keessa sochiin hidhattoota kanaa ni heddummata kan jedhan bulchaan Godina Gujii Obboo Roobaa Turcee, rakkoo nagaa dhabiinsaa hedduu uumaa jiru jedhu.
"Torbeedhuma kana aanaa Gumii Erdalloo keessatti abbaa warraa fi haadha warraa nagaan daldalatanii galaa turan ajjeesanii jiru."
"Guyyaa kaleessaa [Kamisa] aanaa Gooroo Doolaa ganda Balaambal jedhamutti caasaa gandaa hojii mootummaa hojjetee galaa jiru nama sadi butanii achi buuteen isaanii hin baramne" jedhan.
Jaarsa umuriin isaa waggaa 80 butanii kiiloomeetira 60 ol ega deemaniiniin booda gadi lakkisanii miilaan deebi'ee akka galu gochuun dararaniiru jedhu.
Gabaasa amma dura jiruun namootni shan butamanii harka hidhattoota kanaa jiraachuus aanga'aan kun ni himu.
Uummanni gocha kana balaaleffatee hiriira bahe jedhu.
Haa ta'u malee hiriira kana jiraattotatu bahe osoo hin taane mootummaatu qindeessee baase jedhanii kan qeeqan jiru. Obboo Roobaan san ni waakkatu.
"Yadni kan uummataati, nuyi deeggars gooneefi jedhu. Uummati waan isaaf ta'u beeka, bahi jettee baasuus hin dandeessu, kan bahu barbaades dhorkuu hin dandeessu" jedhu.
Uummati hiriira bahuun dabalataan mootummaan tarkaanfii fudhataa jira kan jedhan Obbo Roobaan, guyyoota lamaan darban hidhattoonni 13 to'annaa jala oolanii jiru jedhu.
Gariin ammoo fedhiin harka kennatanii galaa kan jiranis jiru jedhu.
"Uummati huxura bahee qabee galche"
Godina Gujii Lixaatti ammoo hidhattoonni Waraana Bilisummaa Oromoo godinicha keessa socho'aa turan hidhannoo hiikkatanii hawaasatti makamaniiru.
Amma dura hidhattoota 70 ol "uummati huxura bahee qabee galche" jechuun bulchaan Godinichaa Obbo Abarraa Buunnoo BBC'tti himaniiru.
Akka Obbo Abarraan jedhanitti huxura jechuun "bakka dhokatanii adamoo godhanii guuruu" jechuudha.
Kan uummati qabee fideen alatti kan ofiin harka kennatanii galan jiraachuus Obbo Abarraan ni dubbatu.
Hidhattoonni kun ammaan dura maqaa Waraana Bilisummaa Oromoon qabsaa'aa turan kan jedhan bulchaan kun, Addi Bilisummaa Oromoo waraanni ala jiru kiyyaa miti jedheeraa, kanaaf dhunfaan warra qabsaa'ani malee Waraana Bilisummaa Oromoo miti jedhu.
Aanaalee godinicha hunda keessatti uummati waliin ka'ee hidhattoota kana huxuraa jira jedhu Obbo Abarraan.
"Uummati ega jibbee waan godhan hin qaban, kanaaf harka kennataa jiru. Yoo didanii kan dhukaasan taate milishaan jiraa, itti dhukaasee uummata waliin qabee akka galan godhaa jira" jedhu.
Uummanni nu nagaa barbaannaa, qabsoo nagaa barbaanna jedhee dideera jedhu.
Hidhattoota deebi'an jedhaman argannee dubbisuuf yaallee itti hin milkoofne.
"Lakkoofsaan xiqqoo ta'anis kan bosonatti hafan akka jiraniifi uummati waan jalqabe akka adda hin kunne, isaanis ni galla jedhanii waadaa galiisatti jiru" jedhu.
Warra galaa jiraniif akkuma kanaan duraa leenjiin kennameefi haala karaa nagaan uummata waliin jiraatan ni mijataaf jedhu.
Warri qabsoo karaa nagaa itti fufuu fedhan paartii fedhanitti makamanii qabsaa'uu danda'us jedhan.